Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta xafiiskeeda ku qaabishay Madaxa haayadda DRC ee wadamada Soomaliland iyo Somalia. – MESAF
News & Events News Wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta xafiiskeeda ku qaabishay Madaxa haayadda DRC ee wadamada Soomaliland iyo Somalia.
Marwo Hinda jaamac xirsi Gaani wasiirka wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland ayaa maanta xafiiskeeda ku qaabishay madaxa haayadda DRC ee wadamada Soomaliland iyo Somalia.
waxaa kulanka aad loogu lafaguray sii xoojinta labada dhinac iyo sidii loo dhameystiri waxyaabihi hore uga dhaxeeyey labada dhinac. Waxaana xooga la saari doona dhinacyadda caruurta, haweenka, naafada, dadka nugul, iyo shaqo abuurka.